सैलेजाको योगदान अतुलनिय : डा. कोइराला - Merodesh.news
सैलेजाको योगदान अतुलनिय : डा. कोइराला
सिस्बनि, जदाह, मोरंग, नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले नेपाली राजनीतिक आन्दोलनमा सैलेजा आचार्यको योगदान अतुलनीय भएको बताए । शैलेजा आचार्यको नवौ स्मृति दिवसको अवसरमा कृष्णप्रसाद कोइराला सेवा गुठीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोइरालाले आचार्यको योगदान अतुलनिय भएको बताएका हुन् ।
राण शासन र र राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलनमा सैलेजा आचार्यले खेलेको भूमिका बिर्सन नहुने उनको भनाई छ । कार्यक्रममा बोल्दै सांसद केदार कार्की, जयराम यादव विराटनगर महानगरपालिका उपमेयर इन्दिरा कार्की लगायतले शैलेजा आचार्यबाट नेपाली समाजले धेरै सिक्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका नेता हसन अन्सारीले सेवा गुठी सञ्चालनकालागि एक लाख ५१ हजार सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
सात जनालाई सम्मान
सैलेजा आचार्यको स्मृति दिवको अवसर पारेर कृष्णप्रसाद कोइराला सेवा गुठिले सात जनालाई सम्मान गरेको छ । गुठीले इन्जिनियर गोविन्द श्रेष्ठ, प्रिन्सिपल सन्तबहादुर अधिकारी,ममता साह, बिन्दु भण्डारी, बुद्धिलाल राजवंशी, नरेशप्रसाद साह र दयाराम फुयाललाई सम्मान गरेको हो । सोही क्रममा २९ लाख ५६ हजार लागतमा निर्माण गरिएको विज्ञान भवनको पनि उदघाटन गरिएको थियो ।